We She Me: ယူနီကုတ်ပြောင်းကြစို့
ကျွန်တော့် ဘလော့က မြန်မာစာတွေကို ပြတဲ့အခါ ယူနီကုတ်စံ (Unicode Encoding Standard)မီတဲ့ ဖောင့် (Font) တစ်ခုခု ပြောင်းဖို့ချိန်နေတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကတည်းကပါ။ ကွန်ပြူတာသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ယူနီကုတ်ရဲ့တန်ဖိုးကို သိပေမယ့် ဒီလို ပြောင်းတာဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ပြီးတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်လို့ မပြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဗမာပြည်သား ကွန်ပြူတာသမားဆိုပေမယ့် ဒီလို ဖောင့်တွေ မြန်မာစာ အက္ခရာတွေကို လေ့လာသူလည်း မဟုတ်၊ တီထွင်သူလည်း မဟုတ် စိတ်ဝင်စားသူလည်း မဟုတ်တဲ့ အတွက် ဘာဖောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အစွဲမထားဘဲ သာမန်အသုံးပြုသူ တစ်ဦး (End User) တစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲ သုံးပါတယ်။ ဆေးခန်းသွားတဲ့ အခါ ဆရာဝန်ပြောသမျှ နားထောင်သလိုပါပဲ။
ဘလော့ တစ်ခုလုံးရဲ့ ဖောင့်ပြောင်းရတာ နေ့စဉ် အလည်လာသူ (စာဖတ်သူ) ၃၀၀မှ ၁၀၀၀ကျော်ထိ ရှိတဲ့ ဘလော့ တစ်ခု၊ တခြား ဇော်ဂျီဖြင့် ရေးထားသော ဘလော့ အခု ၃၀ ခန့်ကို နေ့စဉ် Preview လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ တစ်ခု အနေနဲ့တော့ မလွယ်ပါဘူး။ ငါ့ဘလော့ဂ် ငါ ဖောင့် (Font) ပြောင်းတာ ငါ့စာဖတ်ချင်ရင် ငါရေးတဲ့ ဖောင့်နဲ့ လိုက်ဖတ်လို့ တင်းမခံနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ထားတာလို့ သူ့ဖောင့်သွင်းပြီး ဖတ်တာတောင် စာအကုန်လုံး ပီပီပြင်ပြင် မပေါ်လို့ မနည်းသည်းခံ ဖတ်ရတဲ့ ဘလော့တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပို့စ်လေးငါးခု ဖတ်ပြီးတော့မှ မျက်လုံးက အထာနပ်သွားလို့ ဖတ်နိုင်သွားတာပါ။ အစက ဘာရေးထားမှန်းကို မသိတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
စာရိုက်တဲ့ အခါလည်း တခြား လက်ကွက်ကို ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ ကျင့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေမှ ရေးတဲ့သူတွေ အဖို့တော့ Comment ရေးချင်ရင်တော့ မလွယ်တာ အမှန်ပါ။ ဇော်ဂျီဖောင့် ခေတ်စားပြီးခါစကတောင် စာဖတ်သူတွေထဲမှာ ဇော်ဂျီ မရိုက်တတ်တဲ့ သူတွေ ရှိနေသလိုပါပဲ။ ဘလော့ရေးတဲ့ သူတွေကတော့ စာရေးနေကျဆိုတော့ ခဏနေ အဆင်ပြေသွားတာပါပဲ။ Comment ရေးသူတွေ အတွက်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဘလော့ကို ပြောင်းတဲ့ အခါ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာကိုပဲ ဖောင့်အသစ် (Keyboad Layout အသစ်) ပြောင်းလို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားသူတွေရေးတဲ့ Comment တွေကိုပါ ပြောင်းရပါဦးမည်။ Comment တွေကိုပါ ဖောင့်ပြောင်းပြီးမှ ရေးတဲ့သူက အရင် (ဇော်ဂျီ) လက်ကွက်နဲ့ပဲ ရေးဦးမည်ဆို အဲဒီစာတွေကို Convert မလုပ်မချင်း ဖတ်လို့ ရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သည်းညည်းခံပြီး စိတ်မှန်းနဲ့ ဖတ်ရင်တော့ ဖတ်လို့ရတာပေါ့။
အဓိက မပြောင်းဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အားကိုးတကြီး စောင့်နေခဲ့လို့ပါပဲ။ ဇော်ဂျီဖောင့် ယူနီကုတ် အနေနဲ့ ထွက်လာရင်တောင် ရေးထားတဲ့ စာတွေကို Convert လုပ်ရမည် ဆိုတာ သိထားပေမယ့် ဘလော့ရဲ့ အသွင်အပြင် စာလုံးအရွယ် စာလုံးအရောင် စာစီစာကျတွေကို ဇော်ဂျီနဲ့ ချိန်ပြီး လုပ်ထားလို့ တခြားဖောင့်ကို မပြောင်းချင်သေးပါဘူး။ ဇော်ဂျီက ထွက်လာပေမည့် ယူနီကုတ်စံ မမီဘူးဆိုတော့ လူလည်း အတော် စိတ်ပျက်သွားပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာလည်း သူ့စံ ကိုယ့်စံတွေကြောင့် အတော် မျက်စိလည်သွားပါတယ်။
နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ "ယူနီကုတ်သမားတွေ" ပါပဲ။ ယူနီကုတ်သမားတွေဆိုတာ ယူနီကုတ် စံမီဖောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ယူနီကုတ်ပြောင်းဖို့ အကူအညီ ပေးသူတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူ။ ယူနီကုတ် မသုံးတာကိုပဲ ဟိုးမျိူးချစ်စိတ် နိုင်ငံရေးကနေ ပုဂွိုလ်ရေးရာအထိ လျှောက်ပြောတဲ့ သူတွေပါ။ ယူနီကုတ်မပြောင်းတာ မြန်မာစာကိုပဲ တန်ဖိုးမထားသလို Linguistic တွေလို မြန်မာ အက္ခရာတွေကိုပဲ မသိသလို ဖြစ်ရပါတယ်။
Amoxicillin သောက်ဖို့ကို သူ့ထဲမှာ ပါတဲ့ ဓါတ်တွေကဘာတွေ သောက်ပြီးရင် ကိုယ်တွင်းမှာ ဇီဝပြောင်းလဲမှု ဘာတွေ ဖြစ်မှာကို မသိဘဲ သောက်လို့ အပြစ်ပြောတဲ့ ဆရာဝန်လိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဒီဆေးကို ဘယ်လိုသောက် ဘာနဲ့ မသောက်နဲ့ သောက်ပြီးရင် မူးဝေတတ်တယ်။ ဒီလောက်ပြောရင် လူနာကလည်း အဆင်ပြေ ဆရာဝန်လည်း အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့။ အခုတော့ အဲဒီ ယူနီကုတ်သမားတွေ ခမျာ ဟိုး ကွန်ပြူတာ စံတွေ စနစ်တွေကနေ မြန်မာ အက္ခရာတွေအထိ လိုက်ရှင်းပြနေရတာ တစ်ခုခုတော့ လွဲချော်နေပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ နိုင်ငံရေးကနေ လူမှုရေးအထိ ပါလာတာကတော့ အတော်လေး ပညာရှင်မပီသပါဘူး။
သူတို့ ဒီလိုဆိုတာ နားထဲဝင်ရ ခက်ပေမယ့် လူတွေခေါင်းထဲတော့ အနည်းနဲ့အများ ရောက်သွားပါတယ်။ Awareness အတော်လေးရလိုက်ပါတယ်။ ဟိုနားကလည်း ဆူဆူ၊ ဒီနားကလည်း ဆူဆူဆိုတော့ ဗမာ အင်တာနက်ရွာကြီးမှာ အတော်လည်း သတင်းလှုပ်သွားပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာ ယူနီကုတ် ပြောင်းချင်သူများအတွက် အတော်ပါပဲ။ Domino Effect ယူဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။
ယူနီကုတ်ပြောင်းလို့ ဘာတွေဖြစ်မည်ဆိုတာ ဆရာသမားများက ပေရှည်ရှည် (တုတ်နဲ့ရွယ်ပြီး) ရှင်းပြထားလို့ အတော်လေး သိပြီး ဖြစ်မှာမို့ ဘာကြောင့် ပြောင်းသင့်တယ် ဆိုတာ မပြောတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်လို "ကျွန်တော်" ကိုတောင် "ကျနော်" မရေးဘဲ "ကျွန်တော်" ရေးတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စံတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် ပိုပြီး လိုက်နာချင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေလည်း ပြောင်းရမှာမို့လို့ အချိန်ကောင်းကို စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။
ယူနီကုတ် ပြောင်းတဲ့အခါ Blogspot ဆိုရင် ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီ ပြောင်းစရာ မလိုပါဘူး။ ပို့စ်ဘယ်လောက်များများ အများဆုံး ၂ နာရီကနေ ၃နာရီ အတွင်းပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ။ Blogspot မှာ ဘလော့တစ်ခုလုံးကို File တစ်ခုထဲမှာ Export (Save) လုပ်လို့ရတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ File ကို Myanmar NLP ကပဲဖြစ်ဖြစ် တခြား Converter နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလိုက်ပြီး ဘလော့ထဲကို ပြန်ထည့် Import လုပ်လိုက်ရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စာတွေတင်မဟုတ် တခြား Comment တွေ ဘလော့ Template ထဲက စာတွေကိုပါ ပြောင်းသွားမှာပါ။ အစမ်းသပ်ခံ ဘလော့တစ်ခုမှာ Rehearsal လုပ်ကြည့်ပြီးမှ လုပ်မည်ဆိုရင် ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ အစမ်းသပ်ခံ အတွက် ဘလော့အသစ်တစ်ခု Create လုပ် လက်ရှိဘလော့က Export လုပ်ထားတာကို အဲဒီဘလော့ထဲ Import လုပ်လိုက်ရင် ဘလော့တစ်ခု ထပ်ပွားလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုပွားပြီး အစမ်း လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဖောင့်(Character Encoding/Keyboard Layout) ပြောင်းတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနဲ့ မပြီးပါဘူး။ အာလုံးက လိုက်ပြောင်းမှာ ပိုတင့်တယ်တာမျိုးပါ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကန့်လန့်လည်း မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ အများ စပါကလင် သောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်လည်း ဆော်ဒါခါး မသောက်ရတော့ဘူးပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ယူနီကုတ်ပြောင်းဖို့ တခြားသူတွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ဘလော့ကို ပြောင်းချင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ဘလော့ကို ယူနီကုတ် ပြောင်းဖို့ ဘယ်လို စဉ်းစားသလဲဆိုတော့ တခြား ယူနီကုတ်ပြောင်းမယ့် ဘလော့တွေက ပို့စ် ၇၅၀၀ ရတဲ့ အချိန်ကျရင် ပြောင်းပါမည်။ ဘယ်လိုတွက်သလဲ ဆိုတော့ (ဥပမာ) ပို့စ် ၁၅၀ စီရှိတဲ့ ဘလော့ဂ် ၅၀ ရရင် ပို့စ် ၇၅၀၀ ရပါပြီ။ အဲဒီအခါကျရင် အားလုံး ပြောင်းကြပါမည်။ ပို့စ် ၇၅၀၀ ဆိုတဲ့ စာနဲ့ ဒီစာတွေကို ဖတ်တဲ့သူတွေက မနည်းတဲ့ အတွက် (စာမရေးတောင်) စာပဲဖတ်တဲ့သူတွေကလည်း လိုက်ပြောင်းဖြစ်သွားမှာပါ။ ကိုယ် Unicode ပြောင်းလိုက်လို့ စာဖတ်တဲ့သူတွေ ကိုးလို့ကန့်လန့်ဖြစ်မှာလည်း အများကြီး မပူရတော့ပါဘူး။
အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ကတော့ ဒီဘလော့ရဲ့ Feed Roll မှာ ၂၀၁၁ တစ်နှစ်တာလုံး အဲဒီလိုပြောင်းမယ့် ဘလော့တွေရဲ့ နောက်ဆုံး ပို့စ်တွေကို အော်တို တက်လာအောင် ဖော်ပြပေးပါမည်။ အခုလက်ရှိ အော်တိုတက်နေတဲ ဘလော့တွေကတော့ ကျွန်တော် ဘလော့ စရေးတုန်းကတည်းက ခင်မင်နှစ်သက်ခဲ့ရတာတွေပါ။ ဒီဘလော့ရဲ့ Feed Roll ကိုဖတ်သူ နေ့စဉ် အနည်းဆုံး ၃၀၀ ခန့် ရှိပြီး Link တစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားရင် ၀င်စားသလို အနည်းဆုံး Hit ၁၀၀ လောက် တစ်ရက်အတွင်း ပို့ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီဘလော့မှာ ဖောင့်ပြောင်းပြီးသွားရင်တော့ အရင်ဖောင့် အဟောင်းသုံးနေသေးတဲ့ စာတွေက Feed Roll မှာ (အခု Unicode နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေလို) ကြည့်လို့ ကောင်းတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် ယူနီကုတ် အတူတူပြောင်းဖို့ Comment နေရာမှာ မိမိဘလော့က လက်ရှိ ပို့စ်အရေအတွက်ကို ရေးပြီး Sign Up လုပ်သွားဖို့ တောင်းပန်ပါရစေ။ ပို့စ်အားလုံးပေါင်း ၇၅၀၀ ပြည့်သွားရင် ဘယ်လို ပြောင်းတယ်ဆိုတာ ပို့စ်တစ်ခုရေးပြီး အကြောင်းကြားပါဦးမည်။ ကျွန်တော့် ဘလော့လည်း ယူနီကုတ်တွေနဲ့ ထိုးထိုးထောင်ထောင် မဖြစ်တော့ဘဲ တခြား ဘလော့တွေနဲ့ အတူး လိုက်ပြောင်းရလို့ စာဖတ်သူတွေကို ဖောင့်အသစ်ထည့်စေဖို့ အားမနာရတော့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် အတူ လိုက်ပြောင်းမည့်သူတွေကို ကြိုတင် ကျေးဇူးဥပကာရ ဆိုပါရစေ။
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ [ယူနီကုတ်သမားများ အပါအ၀င် :) ]
မေငြိမ်း - 1/5/11, 2:22 AM
အင်း အမကတော့ ခုထိ လည်တည်တည်ပဲ.. နည်းနည်းလည်း စိတ်ညစ်တယ်။ ဇော်ဂျီကိုပဲ ကြိုက်နေတယ်.. ခုထိတော့ ပြောင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးဘူး ကိုအင်ဒီရယ်..
JohnMoeEain - 1/5/11, 2:32 AM
need to change soon.
Evy - 1/5/11, 2:42 AM
အစ်မ မေငြိမ်းပြောသလိုပဲ ဇော်ဂျီကိုကြိုက်တုန်းပဲ ကိုအန်ဒီရေ။ သူများတွေအားလုံးပြောင်းပြီး မပြောင်းမဖြစ်မှပဲပြောင်းမလားလို့
Anonymous - 1/5/11, 3:20 AM
I've been reading your blog since your 5th post but never leftacomment before.
But after reading this post, I think I have to leaveacomment, or shall I sayarequest?
If it's possible, pls don't change into unicode coz I won't be able to read your blog anymore.
I'm patriotic (in my own way), and I still have to depend on "burglish" (in other words, I'm not an IT expert nor I can type zawgyi) but I don't believe that we need to change into uni code in order just to show our patriotism, that's BS (pls excuse my language)!
Shinlay - 1/5/11, 3:27 AM
ပြောင်းရမှာ... မပြောင်းမဖြစ် ဖြစ်လာရင်တော့ပြောင်းရမှာပေါ့။
ကျမက နည်းပညာတွေ၊ခလုပ်တွေတဲ့သိပ်မကျွမ်းကျင်တော့ လမ်းတ၀က်မှာမလုပ်တတ်တော့မှာကြောက်ပါတယ်။
ကိုအန်ဒီ ဆီက ဘယ်လိုပြောင်ရမယ်ဆိုတာလေးဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့
ShwunMi-ရွှန်းမီ-ရှနျးမီ - 1/5/11, 4:20 AM
I don't want to use the converter.. because my blog template is tailor made. I don't want to mess it up.
JUSTICE999BURMA - 1/5/11, 5:42 AM
ကျနော်ကတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ ပဲဖက်မွေးလာတယ်ပြောရမလားပဲဗျာ.... ကျနော် မြန်မာဖောင့်စရိုက်တာ ၂၀၁၀ လဆန်းပိုင်းပါ... အဲ့ဒီအချိန်မှာ အဆင်ပြေတာ (အဆင်သင့်ဖြစ်တာ၊ လက်လှမ်းမှီတာ) က ကိုဇော်ဂျီပါပဲ.. အဲ့လိုနဲ့ဇော်ဂျီမှ ဇော်ဂျီဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ...
အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကျနော် သိပ်နားမလည်ပေမယ့် စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်.. ခက်တာက တစ်ခုခုကိုစွဲပြီဆို ပြင်ရခက်တဲ့ အကျင့်က ဆိုးနေတာပါ။ ကျနော် ဘလော့စရေးပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ၀င်းမြန်မာတို့တခြား ဖောင့်တွေ (ဘီဘီစီမှာထင်တယ်) သုံးတဲ့ ဟာတွေဆို တော်တော်အထင်သေးစိတ်ဝင်မိတယ်... ဇော်ဂျီကသာ အသုံးများသလို ဖြစ်နေတော့ တခြားဖောင့်သုံးတဲ့ ဘလော့တွေဆို တအားစိတ်ဝင်စားရင် ကော်ပီလုပ်ပြီးမှ ဖောင့်ပြောင်းပြီးဖတ်ခဲ့တယ်..
ခုတော့ ကိုအင်ဒီပြောသလိုပဲ အပြောင်းအလဲအတွက် ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အချိန်ရယ်... လက်လှမ်းမှီသမျှရယ်.. ကိုယ့်ကို (ဘလော့ကိုကိုင်တွယ်တဲ့အချိန်) လမ်းလေးပြနိုင်မယ့်သူ ရှိရင်တော့ ကျနော်ပြောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးပါကြောင်း ကိုအင်ဒီ နဲ့အစ်မရေ...
(အစ်မတို့အစ်ကိုတို့မိသားစု ကျန်းမာကြပါစေကြောင်းဗျိုး)
ZT - 1/5/11, 6:25 AM
လက်ကွက် အသစ် မကျင့်ချင်သူတွေ အတွက် ဒီကီးဘုတ်လေး သုံးလို့ ရပါတယ်။ http://www.myanmarlanguage.org/tools/nhm-keyboard-unicode ပြောင်းမယ် စဉ်းစားတဲ့ သူတွေကိုတော့ လက်ကွက် အသစ်ကို စမ်းကြည့်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော်က လက်ကွက်နှစ်ခုစလုံး ရိုက်နေတဲ့သူဆိုတော့ ယူနီကုတ်လက်ကွက် သုံးရင် အခုလက်ရှိ ဇော်ဂျီလက်ကွက်ထက် သိသိသာသာ ပိုမြန်တာကို သတိထားမိတယ်။
rose - 1/5/11, 9:20 AM
ကိုအန်ဒီရေ... ရို့စ်လည်း ဘလော့ဂ် မရေးခင်တည်းက ဇော်ဂျီဖော့နဲ့ပဲ ရင်းနှီးနေတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မဆုံးဖြတ်တတ်သေးဘူး။ ပြီးတော့ ရို့စ်ပဲ တုံးလို့လား မသိ၊ ရေးထားတာ အားလုံး နားမလည်ဘူး။ ယူနီကုတ် ဘယ်လို ပြောင်းရမလဲ ဆိုတာပါ သေချာ ရှင်းပြပါနော်။ ရို့စ် အသုံးများပြီး စာရိုက် မြန်တာက ဇော်ဂျီဖော့ရယ် ၀င်းအင်းဝ ဖော့ရယ်....။
khin oo may - 1/5/11, 9:34 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း - 1/5/11, 10:36 AM
ကျွန်တော်ကတော့ စံကိုက်ကိုက်မကိုက် အသစ်ပြောင်းရင် ဒုက္ခရောက်တတ်လွန်းလို့..အဟောင်းမှာပဲ နေတော့မယ်..
ကိုယ်လို အဟောင်းသုံးချင်တဲ့ အင်အားစုကလဲ ခုထိမနဲ သေးဘူး ဆိုတော့..
ဗမာ ဘလော့လောကကြီး font မျိုးစုံနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ဆက်လက်ချီတက်ကြတာပေါ့ဗျာ....
ko9- 1/5/11, 11:33 AM
Anonymous - 1/5/11, 12:31 PM
I've tried to download this Unicode and fonts are not like ZawGyi, I can't even read those, they are like combination of symbols and Burmese letters, is that normal? Any way to fix it?
Andy Myint - 1/5/11, 12:39 PM
စိတ်မညစ်ပါနဲ့ မမေငြိမ်း။ ကိုယ် အဆင်ပြေသလိုပေါ့။ Sooner or Later တော့ ပြောင်းဖြစ်ကြမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း Ready မဖြစ်သေးပါဘူး။ အမသားကြီးလက်ထဲ ဘလော့ကို အပ်လိုက်ပေါ့။ :)
Right, John Moe Eain, most of us will be changing sooner or later. I bet on “later”. Perhaps 2-3 years. It’s justamatter of time and readiness.
ဒီလိုပဲ စောင့်နေကြတာ ကျွန်တော်လည်းပါတယ် Evy။ အများပြောင်းမှ လိုက်ပြောင်းရခြင်းက စာဖတ်သူတွေဘက်က လက်ခံနိုင်လာတယ်လို့လည်း ထင်တယ်။ နောက်ပြီး သူများရဲ့ ဇော်ဂျီဘလော့မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Unicode စာတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေမှာလည်း တစ်ကြောင်း။
Dear Reader, I will wait most of the readers are ready to accept it. When I change font, it is not at all on Patriotism. It will purely be for the sake of technical standard.
ပြောင်းရတာ ထင်သလောက် မခက်ပါဘူး မရှင်လေး။ ကူညီပါမည်။ ပြောင်းပြီး စာရိုက်ရတာ (အကူ Software တွေမသုံးရင်) ပထမပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်း လက်ဝင်မယ် မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ရွှန်းမီရဲ့ နည်းလည်း မဆိုးဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘလော့တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းချင်လို့။
Unicode ပြောင်းဖို့ နည်းပေးလမ်းပြ စာတွေ အတော်ရှိပါတယ်Justice999BURMA. အချိန်တန်ရင်တော့ နွားပိန်ကန်ပေမှာပေါ့။
Thanks, ကိုZT. ပြောင်းမည့်ပြောင်းတော့ လက်ကွက်ပါ ကျင့်ရတော့မှာပေါ့။ တခါတလေမှ ရိုက်တဲ့သူများအတွက်တော့ အသုံးဝင်မှာပါ။
နည်းနည်းထပ်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ Rose။ ဒီထက်လွယ်တဲ့ နည်းတွေလည်း ပေါ်လာမှာပါ။
ဟူးးးးးးး … မခင်ဦးမေ။ ဆယ်လယ်ဗြီတီတွေကတော့ ပြောပေါ့။
ဒီလိုပဲ ၂နှစ်တိုင်သည် ၃နှစ်တိုင်သည် သွားဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်လည်း မျှော်လင့်ပါတယ် ဘကျောက်။
အေးဆေး ကလေးထိန်းပေါ့ ကိုနိုင်။ သားနဲ့သမီးကတော့ အရွယ်တူဆိုတော့ အတော်လေး ဆော့တတ်ကြတယ်။ အရုပ်လုတာကလွဲရင်တော့ ရန်မဖြစ်ဘူး။ ဒါတောင် တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၃ခေါက်လောက်တော့ ရန်ဖြစ်သေးတယ်။
Dear Reader, are you sure you have downloaded and installed the right font for the site you are reading? I suggest asking the owner of the site or blogger who should be willing to help you read.
ချစ်ကြည်အေး - 1/5/11, 12:52 PM
ကျမလည်း ဇော်ဂျီမှာပဲ နေဦးမယ် မပြောင်းမဖြစ်တဲ့ အနေအထားရောက်မှပဲ ပြောင်းတော့မယ်....ကိုအန်ဒီရေ :)
Anonymous - 1/5/11, 1:35 PM
Aung Win Myat - 1/5/11, 2:23 PM
There are too much talk about benefit of changing UNICODE and we all agreed on it.. The problem is there is no visible benefit and effectiveness on users.. And also, there is no ready-to-use application that is much needed UNICODE for most of users yet..
"We can CHANGE...., BUT" (Mr. Obama) :D
မိုးစက်ပွင့် - 1/5/11, 5:44 PM
တော်တော်များများက ယူနီကုဒ်ကို စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ နည်းပညာ အခက်အခဲက အတားအဆီးတခု ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါတယ်။
ပို့စ် ၄-၅ခုရှိမဲ့ အစမ်းသပ်ခံဘလော့လေးတခုကို လက်တွေ့အဆင့်ဆင့် ပြောင်းပုံအသေးစိတ်ကို သရုပ်ဖေါ်ပုံနှင့်တကွ ပို့စ်တခုသတ်သတ် တင်ပေးနိုင်ရင် လိုက်စမ်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့။ ဒါမှဘဲ ပြောင်းသင့် မပြောင်းသင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
ဘာရယ်မဟုတ် .....ဒီလိုလုပ်ပါလား (ဟိုလိုလုပ်ပါလား) ပြောကြည့်တာပါ...
ZT - 1/5/11, 6:37 PM
ဘလော့ခ် ပြောင်းနည်း ရေးပြီးသား အသင့်ရှိပါတယ်။ ဒီမှာ Download ဆွဲလိုက်ပါ။ http://www.mediafire.com/?im1nuiyd3zt အဲဒီဖိုင်ထဲက ကွန်ဗာတာ လင့်ခ်က မှားနေတယ်။ လင့်ခ် အမှန်က http://goo.gl/iPy5 အဲဒီမှာပါ။ (ကိုအင်န်ဒီ ဘလော့ခ်မှာ လာရှုပ်ရတာ ဆောရီးပါ။ ကူညီချင်လွန်းလို့ပါ။ :D)
Kay - 1/5/11, 8:57 PM
ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာ..အားလုံး လိုလို ရှုပ်ထွေးေ၀၀ါး နေတဲ့ အချိန်..ကိုအန်ဒီ အစီအစဉ်လေး ကို သဘောကျ သွား တာနဲ့.. ကဲ..ပြောသလို မန့် လိုက်စမ်းမယ် ဆိုပြီး..မန့် တွေ ကြည့်လိုက်တော့..ပိုမော.. သွားပါလား..။း)
အဲဒါ..ခက်တာပဲ နော်.. ဘိုလုပ်ကြမလဲ..
ကိုအန်ဒီ ရေးပြတာ ရှင်းတယ်..ကြောင်းကျိုး ဆီလျော်တယ်.. ဒီ ယူနီကုဒ် နဲ့ပတ်သတ်လို့.. ကျမ တို့ လည်း မပြတ် စောင့်ကြည့် နေပါ့မယ်.. ကိုအန်ဒီ လည်း.. အဲဒီလို..သေချာ အားလုံး လက်ခံနာလည်အောင်.. ဆက် ရေးပေး နေပါ..။ ကျေးဇူးး) အပေါ်က.. ဇက်တီ.. ဖူးဖူး ရေးတာတွေ လည်း ဖတ်ထားပြီးပါပြီ။ အားလုံး တပြေးညီ ဘယ်လောက် အနီးဆုံး ဖြစ်နိုင်ကြမလည်း ဆိုတာ..ပြသာနာ..
သဉ်ဇာ - Thinzar - 1/5/11, 9:03 PM
ကိုအန်ဒီ>> ပို့စ် ၇၅၀၀ မြန်မြန်ပြည့်ပါစေ။ :-)
ကိုဇက်တီ>> ကူညီချင်လွန်းရင် ဘလော့ဂ်ကို ယူနီကုဒ် ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကို ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခု အရင်ရေးပါလား။ တော်တော်များများက ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး မဖတ်ချင်ကြဘူး။ ဟိုး..နံပါတ်တစ် ဖောင့်သွင်းတာကနေ နောက်ဆုံး CSS code ပြောင်းတာအထိ ပို့စ်တွေ အများကြီး ရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ရှိရင်တော့ ဖတ်ကြမယ်ထင်တာဘဲ။
Andy Myint - 1/5/11, 9:40 PM
အတော်များများကလည်း ဒီလို အချိန်ကို စောင့်နေကြတယ် ထင်တယ် မချစ်ကြည်အေး
Thanks Reader from ICST. I was first from Hlaing Campus and took leave for2years then in Shwe-Pyi-Thar temporary one and then in the latest one. So I was in all3campuses of UCSY through out my study. :)
I somewhat agree with first part " no visible benefit and effectiveness on users" Aung Win Myat.
ကိုဇက်တီပြောတဲ့ အတိုင်းပါပဲ မိုးစက်ပွင့်။ အဆင့် ၅ နဲ့ အဆင့် ၆ ကြားမှာ Blog တစ်ခု Create လုပ်ပြီး ဘလော့ အသစ်ထဲကို Import လုပ်ပြီးမှ အဆင့် ၁ ကနေ ပြန်သွားပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ Template တွေကတော့ ဘလော့အသစ်မှာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် Template ကတော့ အလယ်က Section တွေ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ Manually ပြန်ပြင်ရပါတယ်။
No worries ကိုဇက်တီ။ ဒီလို ရေးပြထားတော့ အတော်ကို လွယ်ပြီး မမှားနိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုဇက်တီ Dupes တွေ ဖျက်နည်းက ပိုပြီး Safe ဖြစ်တယ်။
ဘိုလုပ်ရမှာလဲ မကေ... Count လုပ်လိုက်တော့မည်။ ဈေးဦး မပေါက်ရတဲ့ကြားထဲ သူကလည်း မတင်မကျ။ :D
အတော်စောင့်ရဦးမယ်နဲ့ တူပါရဲ့ သဉ်ဇာ။ ကိုဇက်တီကို အကြံပေးထားတာ မှန်တယ်။
P.Ti - 1/5/11, 9:50 PM
UniCode ပြောင်းလဲရေး အရှိန်ရလာတာတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကိုအန်ဒီပြောသလိုပါပဲ တစ်ယောက်ထဲပြောင်းဖို့မလွယ်တော့ အများလိုက်ပြောင်းမယ်ဆို ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ရေးထားတဲ့စာကို UniCode နဲ့ ဇော်ဂျီပါ နဲ့ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ဖို့လွယ်ပေမယ့် မှတ်ချက်တွေကို ဖောင့်နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ ရေးလို့ ဖတ်လို့ ရအောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းရှာဖို့လိုလိမ့်ဦးမယ်။
ရှေ့ကမှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ပဲဖတ်မယ့် သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့ အဲဒီအချက်တွေကို သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ပြောင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ဖောင့်နဲ့ရေးမယ် လာမဖတ်ချင်နေဆိုပြီးတော့ မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဖတ်တဲ့သူနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းရှိလည်း ဖတ်တဲ့လူတွေ အဆင်ပြေစေချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် UniCode ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလောက် ရုတ်ရုတ်ဖြစ်နေရတာ တကယ်တော့ UniCode လုပ်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ပါပဲ။ ကိုZT တို့လို အချိန်ကုန်ခံ အပင်ပန်းခံပြီး standard တစ်ခုအောင်မြင်ရေးကို ကူညီနေတဲ့လူတွေကိုတော့လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမှ အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတာ ဒီပြဿနာတွေကိုကြည့်ရင် နားလည်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ စေတနာထားရှိမှုပါ။ လူတွေက Web ပေါ်မှာသုံးဖို့ မခက်ခဲပဲ ဖတ်လို့ကောင်းမယ့်ဖောင့် လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဇော်ဂျီအဖွဲ့က ငွေစိုက် လူစိုက်ပြီး အများ အဆင်ပြေမယ့်ဖောင့်တစ်ခု မြန်မြန် ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတော်ငွေတွေ အများကြီးသုံး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့ကြီးက ဘာဖောင့်မှ ထွက်မလာသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်ကတော့ အဲဒီအဖွဲ့ကြီးမှာ ကိုယ့်အကျိုးကိုရှေ့တန်းတင် အများအကျိုးလို့ နာမည်ခံချင်တဲ့ လူကြီးတွေက တော်တော်များနေခဲ့တာပါပဲ။ နောက်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ Unicode 4.1 ပဲရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာစာ Unicode မတည်ငြိမ်သေးပါဘူး။ အဲတော့ ဇော်ဂျီက သူ့အချိန်နဲ့သူတော့ စံဖြစ်တဲ့ ဖောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ကြီးကထုတ်လိုက်တဲ့ဖောင့်တွေကလည်း အင်မတန်မှ သုံးရခက်ပြီး ရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ ဘယ်သူကမှ သုံးချင်စိတ်မရှိခဲ့တာကို ဇော်ဂျီကြောင့်ဆိုပြီး ပြဿနာရှာခဲ့သလို ဇော်ဂျီအဖွဲ့ကလူတွေကိုပါ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ခက်တာက ဇော်ဂျီမှာ ဘယ်တွေပါတယ်ဆိုတာတောင် မသိခဲ့ပါဘူး။ သုံးမယ့်သူမရှိလို့ အစိုးရဌာနတွေများ မသုံးမဖြစ် သုံးရမယ်လို့တောင် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ UniCode မတွင်ကျယ်တာ ဇော်ဂျီကြောင့်လို့ပြောတာ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမတိုးတက်တာ နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့ထားလို့ ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးနဲ့ တူပါတယ်။
အဲဒါနောက်ပိုင်းမှာ UniCode ကစံဖြစ်လာလို့ သုံးသင့်တယ်လို့ စေတနာထားပြီး ပြောဆိုရေးသားတာတွေ၊ ပြောင်းလဲဖို့ကူညီတဲ့လူတွေ ရှိလာလို့ အခုလို လှုပ်ရှားမှုလေးရှိလာတာပါ။ ဒါတောင်မှ အဲလိုပြောတဲ့လူတွေက ဇော်ဂျီကို တိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှုတွေရှိသေးတော့ အများအမြင်မှာ မကြည်လင်တာတွေရှိပါသေးတယ်။ ဇော်ဂျီသုံးရင် ဘလော့တွေပျက်မယ်၊ ရေးထားတာတွေ ဖတ်မရဖြစ်မယ်၊ Google က လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ Search Engine မှာ ရှာရင်တွေ့တော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ လူတွေကိုေ၀၀ါးစေတဲ့ အရေးအသားတွေက UniCode ပြောင်းလဲရေးကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ဇော်ဂျီဖောင့်သုံးတာ အမျိုးဖျက် လိုလိုပြောတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကထွက်လာသေးတယ်။ အဲဒီတော့ UniCode ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုပြောချင်တာက စေတနာမှန်ပါ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ End User တွေက ရေးရတာ ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်၊ အရသာရှိမယ် (ဖောင့်မလှရင် စာဖတ်ရတာ အရသာပျက်ပါတယ်) ဆိုရင် Standard တစ်ခုကို လိုက်နာဖို့ရာ ၀န်မလေးပါဘူး။ Standard ကို လိုက်နာတဲ့ FireFox ကိုတောင် 2003 ကတည်း default browser အနေနဲ့ သုံးခဲ့သေးတာပဲ။ MS IE 5/6 တို့ဆိုတာ စံမလိုက်နာတဲ့ browser တွေပါ၊ ဒါပေမယ့် web developer တွေက အသုံးပြုသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ အခုအချိန်အထိ 2001 ကထွက်ခဲ့တဲ့ IE6ကို လိုက်ညှိပေးနေရတုန်းဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ စာရေးဖို့ပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျွန်တော်တို့တတွေလည်း ရေးတဲ့စာ ဖတ်စေချင်ရင် UniCode ပြောင်းတယ်ဆိုရင်တောင် ဇော်ဂျီဖောင့်အတွက် လိုက်ညှိပေးရမှာပါပဲ။ ဖတ်ချင်မဖတ်ချင်နေ တို့ကတော့ Unicode မလုပ်ချင်ပါဘူး။
စာဖတ်တဲ့လူတွေက စာဖတ်ချင်တာလေ၊ ဖောင့်ကိုဖတ်ချင်တာမှ မဟုတ်ဘဲ။
P.Ti - 1/5/11, 9:59 PM
UniCode ပြောင်းလဲရေး အရှိန်ရလာတာတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကိုအန်ဒီပြောသလိုပါပဲ တစ်ယောက်ထဲပြောင်းဖို့မလွယ်တော့ အများလိုက်ပြောင်းမယ်ဆို ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ကဲ ကိုအန်ဒီကို ဈေးဦးဖောက်လိုက်ပြီနော်...
Facebook မှ ဆက်ရေးထားပါသေးတယ်။ ဒီမှာ လေကြောရှည်လို့ တင်မရဘူးတဲ့။
တင်မရဘူးဆိုပြီး တက်သွားတယ်... :P
Anonymous - 1/5/11, 10:57 PM
blogger တွေချည်းလိုလိုကပဲ ရေးသွားကြလို့ ဖတ်သူကလည်း ဝင်ရေးပါတယ်။
စံတွေနဲ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ နားမလည်ပါ။ ဖတ်ကောင်းတာ ဖတ်ကောင်းတဲ့သူတွေကို ပုံမှန်ဖတ်ချင်တာပါပဲ။ မတတ်ကျွမ်းတော့ သူ့ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာတွေဖတ်ဖို့ mm3 ကို font ထဲ သွင်းချည်ထုတ်ချည်လုပ်ပြီး ဖတ်နေရပါသေးတယ်။(သွင်းလိုက်ရင် ဇော်ဂျီသမားရေးတာဖတ်မရ၊ ထုတ်လိုက်ရင် ယူနီကုတ်သမားရေးတာ ဖတ်မရဖြစ်နေသေးလို့ပါ) ဒါပေမဲ့ စိတ်ရှည်ပါတယ်။
မိန်းမကိုလည်း တိုင်ပင်(အသိပေးအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်တောင်း)ပါတယ်။ ပြောင်းကြစို့ လို့ပေါ့။
ရှင်က ဘာတွေ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်လုပ်ချင်တာလဲ။ ရှင့် ယူနီကုတ်ဆိုတာက ကျုပ်တို့ချင်း ဂျီတော့ ချက်တဲ့အခါမြင်ရလား။ ယီးတီးယားတားမလုပ်နဲ့နော် လို့ အကြိမ်းခံရပါတယ်။
ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း ကြိုးစားပြီး ဖတ်သွားပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ဖတ်သူ chatသူများကိုလည်း အဆင်အပြေဆုံးနည်းလေးတွေ သင်ပြပေးပါ ။
Andy Myint - 1/5/11, 11:37 PM
ကိုပီတိ ရေးသွားတာ တချို့ဟာတွေ ကြားလိုက်ရတယ်။ တချို့လည်း မသိဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ အဲဒီလို အဲဒီလိုပဲ။ သူတို့ကလည်း သူတို့ Politics လေးတွေနဲ့သူတို့ ဆိုတော့ အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်တွေကတော့ ရှိတော့မှာပေါ့။ အခုတော့ စံလည်းဖြစ်နေပြီ သုံးရတာလည်း မဆိုးဘူးဆိုတော့ လူညီရင် ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးလိုက်တာ။
ကိုပီတိရယ်၊ မရှင်လေးရယ်၊ မကေရယ် ကိုတော့ ဆွဲပြီး စာရင်းသွင်းလိုက်ပြီ။ ဇွတ်... :)
စာဖတ်သူ တစ်ဦး... အကိုပြောမှပဲ ကျွန်တော်လည်း ကြားဖူးတော့တယ်။ ကျွန်တော်ဆီမှာ ပိတောက်ပဲသွင်းထားတော့ မကြုံဖူးဘူး။ Myanmar3 သွင်းပြီး GTalk မှာ စမ်းကြည့်ပါဦးမည်။ ကျွန်တော် မပြောင်းချင် မပြောင်းဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကလည်း ပုံမှန် အေးအေးဆေးဆေး စာဖတ်နေတဲ့သူတွေ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဖတ်လို့ မရတဲ့စာတွေဆို ဖတ်ကိုမနေတော့ဘူး။ စာဖတ်တာတောင် ကလေးတွေ အိပ်တဲ့အချိန် ရုံးမှာ အားတဲ့ အချိန်လုဖတ်ရတာ ဆိုတော့ ကိုယ့်စာတွေ လာဖတ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်။
ဇွန်မိုးစက် - 1/6/11, 12:19 AM
အပေါ်က ကိုပီတိပြောသွားတာကို လက်ခံပါတယ်။
ဇွန့်ကတော့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကိုကြည့်ပြီး လိုက်ပြောင်းမယ် စိတ်ကူးထားပါတယ်။
Anonymous - 1/6/11, 12:29 AM
ကျွန်တော်နားမလည်လို့ လည်သလိုပြောလိုက်မိတာ။ ကျွန်တော့်မိန်းမကလည်း နားမလည်ဘူးဆိုတော့လေ..အဟဲဟဲ ..ကြိမ်းတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ဖတ်ရုံလောက်တော့ ခုနလို သွင်းချည်ထုတ်ချည်ပေါ့ ။ စိတ်ရှည်တယ်။ ခုလို မှတ်ချက်ကလေးဘာကလေးပေးချင်တဲ့အခါအတွက်တော့ အကိုတို့ ပြောကြပုံအရဆို font သွင်းလိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတော့လေ။ အဲ့ဒါ ဇော်ဂျီဖောင့်ကျေးဇူးနဲ့ ချက်ရည်လူးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လင်မယားရဲ့ ချက်ကိစ္စကိုများ ထိခိုက်နိုင်မလားပေါ့လေ ။ မိန်းမကပြောတာပါ ။ကျွန်တော်ကတော့ အကိုတို့ရေးတာတွေကိုလည်း ဖတ်ချင်တယ် ။ မိန်းမနဲ့လည်း ချက်ချင်တယ်လေ။ အဲ့ဒီလိုပါ။
Zephyr - 1/6/11, 12:55 AM
Happy New Year Ko Andy and family,
၂၀၁၁ မှာတော့ Blog ကို Unicode ပြောင်းဖြစ်မှာပါ။
Zaw-gyi မှာ အဓိက အားနည်းချက်တွေက Search Engine friendly မဖြစ်တာကလည်းဆိုးပါတယ်။
Unicode တွေက လောလောဆယ် Browser တွေအားလုံးနဲ့တောင်
အဆင်ပြေပြေ အလုပ်မလုပ်သေးတဲ့အတွက် စဉ်းစားနေတာပါ။ မနှစ်က ပြောင်းမလိုလုပ်နေတုန်း Backward compatibility issue ရှိနေတာကို စိတ်ကုန်လို့ မပြောင်းဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
Blogspot မှာ ပြောင်းကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ Standard လုပ်တဲ့အခါ community ကိုပါ ထည့်စဉ်းစားရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ Unicode စစ်စစ်ပဲ သုံးဖို့ဖြစ်လာရင် ပိုကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ Zaw-gyi ကို ကျေးဇူးကန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Zaw gyi font ဟာ Myanmar Online Community
ကို အများကြီး အထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုထက်ထိလည်း စာရေးဖို့ဖတ်ဖို့ကိစ္စမှာတော့ Zawgyi က ပိုအဆင်ပြေနေတုန်းပါပဲ။ Unicode ပြောင်းသုံးဖို့ရည်ရွယ်တာကလည်း အိုင်တီသမားတွေအနေနဲ့ ရေရှည်ဖြစ်သင့်တာကို ကူညီကြတဲ့သဘောပါ။ Unicode ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အပိုင်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ဆိုတာကလည်း Unicode သုံးတဲ့သူတွေများလာမှ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Unicode ပြောင်းဖြစ်မှာပါ။
TZA - 1/6/11, 2:20 AM
ကျနော်ကတော့ ပြောင်းကိုပြောင်းရေးမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ရေးပြီးသားတွေကို ယူနီကုဒ်ပြန်ပြောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပို့စ် ၇၀၀ ကျော်ထဲက selection လေးငါးဆယ်လောက် ရွေးထုတ်ပြီး ပြောင်းမယ်လို့ပဲ စိတ်ကူးပါတယ်၊ ပြီးရင် အဟောင်းကို ပိတ်ပစ်ရင်ပိတ်ပစ်၊ မပိတ်ရင်လည်း ဒီတိုင်း ပစ်ထားတော့မှာပါ၊ ယူနီကုဒ်နဲ့ သီးသန့် ဘလော့ဂ်အသစ်တစ်ခု ရေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ blogger က အရင်ကလို နာမည်တစ်ခုကို ချက်ချင်း release လုပ်ပြီး နောက်ဘလော့ဂ် အသစ်တစ်ခုနဲ့ တန်းချိတ်ပေးလို့ မရတော့ဘူး၊ ဆိုတော့ နာမည်အသစ်တောင် ရှာပေးရမလို ဖြစ်နေပါတယ်၊ ဒါကမှ ကျနော့် လက်ရှိ concern ပါ။
TZA - 1/6/11, 2:25 AM
အပေါ်မှာရေးသွားတဲ့ blogger ဆိုတာ blogger.com (or) blogspot ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ယူနီကုဒ်သာ အစောကြီးကတည်းက mature ဖြစ်နေရင် ဒီလိုပြဿနာ မရှိတော့ပါဘူး၊ ဇော်ဂျီ ရှိနေလို့ အွန်လိုင်းပေါ်က မြန်မာတွေ မျက်လုံးပွင့်နေတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ယူနီကုဒ်က ဘုရားဖြစ်ပြီး ဇော်ဂျီက ငြမ်းဖြစ်နေတာကိုတော့ လက်ခံဖို့ လိုပါတယ်။
မောင်မျိုး - 1/6/11, 2:53 AM
လောလောဆယ် မစမ်းရဲသေးတာကော ကိုယ်က နည်းပညာတော်တော်ကျွမ်းတာဆိုတော့ သိပ်မယုံတာနဲ့ နောက်ပြီးသိပ်သဘောမပေါက်သေးတော့ ဇော်ဂျီကိုပဲ သုံးကြည့်အုံးမယ် ကိုအင်ဒီ ပို့စ်ကိုကော ကော့မန့်တွေကိုပါ စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ် ။
Anonymous - 1/6/11, 7:51 AM
Now that I've successfully installed unicode (with the help from Unicode team), I could read almost everything, except the Burmese fonts on facebook that some of my friends posted. Does anyone have same experience? Any suggestion? Thanks in advance!
Moe Cho Thinn - 1/6/11, 11:55 AM
အမကတော့ အဲဒီ ကုတ်တာတွေ မကုတ်တာတွေ နားမလည်ပါဘူး။ အဲဒီပညာရပ်ဖက်မှာ အတော်ညံ့သူမို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက ရှင်းပြလို့ ယူနီကုတ်ဟာ ပြောင်းသင့်တဲ့ font တခု၊ အင်တာနေရှင်နယ် စံမီ စနစ်တကျ လုပ်ထားတာလို့တော့ အကြမ်းဖျင်း နားလည်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော အများစာဖတ်သူရော သုံးနေကျ ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဂျီကလဲ အရိုးစွဲနေတယ်။ အချိန်မကျသေးလို့ မပြောင်းဖြစ်သေးဘူး လို့ပဲ ပြောရမှာ..။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်မှန်း သိပေမဲ့လည်း စွန့်စားပြီး လုပ်ဖို့ သတ္တိမရှိဘူးလို့ ၀န်ခံရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အများသဘောမတူတာ မလုပ်ရဲဘူးကိုး။ အခုလို စာတလုံး ရေးဖို့ ဖတ်ဖို့အရေး ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောကြ ဆိုကြတာတွေကိုလဲ စိတ်မကောင်းဘူး။ စိတ်လဲ ညစ်မိပါတယ်။ ဟိုးအစောကတည်းက ဘာလို့များ တခုတည်း ညီအောင် မလုပ်ကြသလဲ မသိဘူးနော်။
အမသိတာတော့ ယူနီကုတ်မှာ ဧရာစာလုံးက လှတယ်။ ပြောင်းကြမယ်ဆို ဧရာဖောင့် သုံးမယ်။
လူငတေ - 1/6/11, 3:40 PM
အင်္ဂလိပ်စာမှာကရှင်းတယ်..အက္ခရာ ၂၆ လုံးတည်းနဲ့.အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ သရ ၅ လုံးကို ပတ်ချာလှည့်ပြီးတွဲနေရင်.ဝေါဟာရတွေကမကုန်ခန်းနိုင်လောက်အောင်ထွက်တယ်..တရုတ်စာဆိုလဲ.သူ့စာလုံးပုစံတွေနဲ့သူစုလိုက်ရင်.ဝေါဟာရတွေထွက်လာတယ်..သူ့မှာသရတို့ဘာတို့မလိုဘူး..အရုပ်နဲ့ပုံဖော်တဲ့ဘာသာစကားဆိုတော့(တလုံးချင်းစီရေးရခက်တာကလွဲရင်ပေါ့).မြန်မာစာမှာက အက္ခရာ ၃၃ လုံးတည်းနဲ့မပြီးဘူး..သရဆိုပြီး..အ.အာ.အိ.အီ.စသဖြင့်ပေါ့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့လူအများစုတောင်မသိတဲ့..မြန်မာသရတွေကို.လိုက်တွဲပြီးမှစကားလုံးဝေါဟာရဆိုပြီးပေါင်းရတာ..သိပ်ခက်တယ်..မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့..မွေးကတည်းက.မြန်မာဘာသာကိုအလကားရထားပြီးသားဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး..နည်းပညာနဲ့ပေါင်းကူးလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာမှာ.ရွာလည်တော့တာပဲ..တခါတည်းနဲ့အပြီးဖော်မတ်တစ်မျိုးတည်းထွင်လို့ကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်.အခုထိ.မုဆိုးစိုင်သင်သွားနေရတုန်းပဲ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..အခုလို..ယူနီကုတ်ပေါ်လာတာ.တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့မြင်တယ်..ဇော်ဂျီစနစ်ကလဲ..ကွန်ပျူတာမြန်မာစာစနစ်အတွက်..အလွန်တရာတန်ဖိုးရှိတဲ့အထောက်အပံ့ပေးခဲ့တဲ့..တန်ဆောင်းကြီးတစ်ခု.လှေကားထစ်ကြီးတစ်ခုပါ..
Lionslayer - 1/6/11, 3:46 PM
@Ma Moe Cho Thin
Ayar is not Unicode. FYI.
ThuHninSee - 1/6/11, 5:21 PM
လူက ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တောင် စိတ်ရှုပ်နေရတော့ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့
Thet Oo - 1/7/11, 12:19 AM
”ရှေ့ဆက်ရန်ခရီးဆိုတဲ့” ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးကတည်းက ယူနီကုတ်တော့ ပြောင်းသင့်ပြီလို့ တွေးလုံးထုတ်ထားပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းမရလဲဆိုတာကိုတော့ လေ့လာဆဲပါ။ ဇော်ဂျီကို စသုံးတော့လည်း ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲ လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုအန်ဒီရဲ့ ဘလော့ဂ် ၅၀ စုတဲ့အထဲမှာ ကျနော့်ကိုစာရင်းတို့ထားပါတော့။ ရှေ့ဆက်ရန်ခရီးဆောင်းပါးကို http://www.myanmarlanguage.org မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျား။
Andy Myint - 1/7/11, 12:35 AM
ဒီလိုလည်း စောင့်နေတဲ့သူတွေရှိတော့ အတော်ပဲပေါ့ မဇွန်မိုးစက်
ချက်ရည်လူးတဲ့ စာဖတ်သူ.. ကိုယ့်ဆရာ အဖြစ်ကိုတွေးကြည့်ပြီး ရယ်ရမလို ငိုရမလိုဖြစ်ရတယ်။ Windows ရဲ့ Regional Setting အောက်က Keyboard မှာလားမသိဘူး Keyboard Layout တွေကို Ctrl+1, Ctrl+2 စသည် ပြောင်းလို့ရတာ ရှိတယ် အကို။ နည်းနည်း စမ်းကြည့်ပါလား။ ဖောင့် (Keyboard layout) ၃ ခုထည့်လို့ ရမရ။
Warmly welcome, Zephyr. ဟုတ်တယ် Chrome မှာဆို Rendering က ပိုဆိုးတာ ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိတယ်။ ဇော်ဂျီကိုတော့ ကျေးဇူးမကန်းပါဘူး။ ကျွန်တော်စက်ထဲမှာဆို Win Innwa တို့ ဘာတို့တောင် အခုထိရှိသေးတယ်။
ကိုTZA တို့ နောက်ဘလော့မှာ အတွေးအခေါ်ပို့စ်တွေ ပိုများမည် ထင်တယ်။ ဘာတဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးရင် ဖလော်တွေ ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုပဲ။ Congratulation, TZA. အသေအချာတောင် မပြောဖြစ်သေးဘူး။ ဘလော့ကို Unicode နဲ့ အသစ်လုပ်ဖို့ အကြံလည်း တစ်မျိုးကောင်းတာပဲ။ ယူနီကုတ်က ဘုရားဖြစ်ပြီး ဇော်ဂျီက ငြမ်းဆိုတာကတော့ မှတ်လောက်သားလောက် ရှိပါတယ်။
လုပ်စမ်းပါ မောင်မျိုးရာ။ (နောက်တာ)
Dear Reader with Facebook problem, I think some converter bookmarklet or Parallel universe Chrome extension could help you. Easy way would be using2Browsers of IE or FF or Chrome or Safari or Opera - one with Zawgyi and the other with unicode.
ဖြစ်တတ်ပါတယ် မချိုသင်းရယ်။ ကျွန်တော်လည်း လူညီရင် ပြောင်းမလို့ လူစုနေတာ။ ဧရာလည်း မဆိုဘူးနော်။ အမပြောမှာ ကျွန်တော်တို့ သွားကြည့်မိတာ။
မှတ်သားလောက်ပါတယ် လူငတေ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလောက် အထိတော့ မြန်မာစာကို မလေ့လာမိဘူး။ Sorting တောင် ပထမနှစ်က မြန်မာစာမှာ မောင်ငယ်စိတ်ညစ်တယ် ဆိုလား ဘာလားနဲ့ ဖြေလာတာ။
Lionslayer, Ayar is not unicode? I just checked their web site and they claim it is 5.2 compatible. Could you please point out the reason? I really wanna know as I kinda like their font face.
Take it easy, ThuHninSee. :) Yeah.. life has some many things to do. We need to priortise them.
ကျွန်တော်လည်း အခုမှ စကြည့်နေတုန်းပဲ ကိုသက်ဦး။ Promising တော့ ဖြစ်တဲ့ပုံပဲ။ မိုက်ဖော်မိုက်ဖက် ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ။
Anonymous - 1/7/11, 1:05 AM
ကောမန့်တွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ထပ်လာဖတ်ရင်းနဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ် သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ရတဲ့ စာဖတ်သူ ကိစ္စကို စဉ်းစားမိလို့ပါ။ သူဆိုလိုချင်တာက ဒီလိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဖောင့်သွင်းဖို့ all-in-one installer တွေ သုံးပုံရတယ်။ အဲဒီ installer တွေက keyboardရယ်၊ browser က font ရယ်၊ gtalk က font setting ရယ်ကို default font အကုန်ပြောင်းပစ်တာကိုး။ ဒီတော့ ဘယ်setting ပြောင်းရမှန်းမသေချာတော့ သွင်းချည် ထုတ်ချည် လုပ်ပုံရပါတယ်။ အမှန်က ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ပဲဖတ်မယ် မရေးဘူးဆိုရင် ဇော်ဂျီဘဲ သွင်းထားပြီးတော့ ယူနီကုဒ်ဖတ်ဖို့အတွက် မြန်မာ၃ ဖောင့်ကို http://code.google.com/p/myanmar3source/downloads/detail?name=mm3.ttf&can=2&q= ကဒေါင်းလုတ်လုပ်။ Control Panel->Fonts မှာ copy paste လုပ်လိုက်ရင်ဆို ရပါပြီ။
MrDBA - 1/7/11, 1:32 AM
ယူနီကုဒ်ပြောင်းဖို့ လူပြည့်သွားရင် အမှတ်တရ ဂရုဖိုတို စိတ်ကြိုက်ရိုက်ပေးမယ်။ ဟီးဟီး။ အလှပုံတွေလဲ အများကြီးရိုက်ပေးမယ်။
Lionslayer - 1/7/11, 1:32 PM
Here is how Unicode encoding works.
Here is official document for ref.
Unicode sequences as consonant+medial+vowel while Ayar sequences visually such asေ(vowel) and ra-yit(medial) coming first before consonant.
Andy Myint - 1/7/11, 2:26 PM
ဟီးဟီး ကောင်းသား ကိုဒီဘီအေ
Thanks, Lionslayer. So the culprit is tha-way-hto and ra-yit, huh? We always need to start with consonant to typeaword in Unicode. Ayar uses type-writer style or something they say in one of their blog posts about this. http://www.ayarunicodegroup.org/faq/what-is-unicode-5-1-and-5-2-difference/ .
Nge Naing - 1/7/11, 3:06 PM
မပြောင်းမဖြစ် ပြောင်းမှရမယ့် အချိန်ရောက်လာရင်တော့ ပြောင်းရမှာပေါ့။ စိတ်ညစ်ပါတယ် ဇော်ဂျီကို အခုမှ လက်အကျင့်ရပြီး စာရိုက်မြန်လာတုန်းရှိသေးတယ်။ တခြားတခုထပ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး အကျင့်ရအောင် ပြန်လုပ်ရလိမ့်မယ်။
လူငတေ - 1/7/11, 3:59 PM
လူငတေ - 1/7/11, 4:00 PM
သိင်္ဂါကျော် - 1/7/11, 7:09 PM
Myanmar3ကမှ Unicode စစ်စစ်ပေါ့နော်.. ခက်တာက အဲဒါကို ရိုက်တတ်ပေမယ့်လည်း ဇော်ဂျီကိုပဲ သံယောဇဉ်တွယ်နေတာ...။ အားလုံးပြောင်းကုန်ကြပြီဆိုတဲ့ အချိန်ကျရင်တော့လည်း ပြောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်..။ လာဖတ်တဲ့လူတွေ comment ပေးသူတွေ အခက်အခဲ ရှိမလားပဲ စိုးတာပါ။
cool emerald - 1/7/11, 9:26 PM
ယူနီကုတျ ကို မွနျမွနျပွောငျး နိုငျပါစဗြော ... ယူနီကုတျ ပွောငျးလိုကျပွီး စာဖတျသူတှေ အဆငျပွဖေို့ on-the-fly converter နဲ့ ဆိုရငျရောဗြာ ... ကြှနျတျော ကတော့ ဘလော့ ကို ယူနီကုတျနဲ့ ရေးပွီး page load လုပျတဲ့ အခြိနျမှာ မွနျမာ၃၊ နဲ့ ဇျောဂြီ ရှိ မရှိ detect လုပျလိုကျတယျ။ မွနျမာ၃ ရှိရငျ မွနျမာ၃ နဲ့ပျေါတယျ။ ဇျောဂြီ ပဲရှိရငျ ဇျောဂြီနဲ့ ပျေါမယျ။ တဈခုမှ မရှိရငျတော့ အင်ျဂလိပျ လိုပေါ့။ ပရိသတျက မွနျမာတှေ တငျ မကဘူး ဆိုရငျ။ ဘယျလောကျထိ compatible ဖွဈပွီး အဆငျပွလေဲတော့ မသိဘူး။ ကြှနျတျော့ ဘလော့ http://cool-emerald.com/ မှာ တော့ လုပျကွညျ့ထားတာ ကွာပွီ။
မယ်ကိုး - 1/8/11, 1:28 AM
unicode ပြောင်းလိုပါသည်။ zawgyi font တောင် ဘယ်လိုသွင်းရမှန်းမသိဘဲ ရေးနေမိသူပါ။ (တစ်ချို့စက်တွေနဲ့ ကြည့်ရင် အခုထိလေးထောင့်မြင်နေရဆဲ) http://www.myanmartutorials.com/ ကဲ့သို့ unicode မရှိလည်း zawgyi နဲ့ ဖတ်လို့ရသော font-embedding လုပ်နည်း သင်ပေးမည်ဆိုလျှင် ကျိန်းသေမုချ unicode ပြောင်းပါမည်း)
T T Sweet - 1/8/11, 2:40 AM
ကိုအန်ဒီရေ ... ကွန်မန့်တွေတောင် သူများထက်နောက်ကျမှ ပေးနိူင်တာ ... ယူနီကုတ်လဲ သူများနောက်မှ လုပ်နိူင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော နောင် အဆင်ပြေဖို့ အတွက် ဘလော့ဂ်တွေကို ယူနီကုတ်သုံးဖို့ အကြံပေးတာ စေတနာအတွက် လေးစားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ - 1/8/11, 10:26 AM
မမယ်ကိုးပြောသလို font-embedding လုပ်နည်း လေးများရလျှင် ကောင်းပါမည်။ ကျမတော့ မဖြစ်မနေပြောင်းရမယ်ဆိုမှ ပြောင်းပါတော့မယ်။
MrDBA - 1/8/11, 10:27 AM
@မယ်ကိုး> font-embedding လုပ်ချင်လျှင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
မယ်ကိုး - 1/8/11, 10:36 AM
ဟုတ်ကဲ့ ကိုဒီဘီရှင့်။ အကူအညီပေးမည်ဆိုလျှင် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးပြုလို့ ညွှန်ကြားပါ။ maecoe@gmail.comး)
အိမ့်ချမ်းမြေ့ - 1/8/11, 10:43 AM
ဇော်ဂျီတောင်မှ လွန်ခဲ့သော ၄နှစ်လောက်ကမှ စမ်းတ၀ါးဝါး စရိုက်ရတာမို့လို့ပါ။ အခု ထပ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့... စိတ်အနည်းငယ် ရှုပ်သွားပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဒါကို ပြန်ပြီးလေ့လာရမှာကို စိတ်မရှည်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Htoo Tay Zar - 1/8/11, 12:13 PM
Please add my blog to your list to getalit more counts =D www.htootayzar.com/myblog I've 663 Posts currently. Thanksalot
Htoo Tay Zar - 1/8/11, 12:34 PM
Forgot to write bro, I'll convert my article to Unicode too. as soon as I got converter...
Saturngod - 1/8/11, 4:00 PM
My blog have 1,031 post and all are unicode.
ဆောင်းချမ်းမိုး - 1/8/11, 5:07 PM
အကိုရေ... အစီအစဉ်လေးက ကောင်းပါတယ်.. ကျနော်ကတော့ မနေ့ကပဲ ပြောင်းလိုက်ပါပြီ.. ဆိုက်တစ်ခုလုံးပြောင်းရတာ အနည်းငယ် အခက်အခဲရှိလှပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာဖြင့် အလွယ်တကူပြောင်းလဲ နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါရဲ့.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းဖို့ရာစိတ်ကူးရှိတာကိုပဲ ကောင်းတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်.. အားလုံးတက်ညီလက်ညီလုပ်ဆောင်သွားဖို့ရာ ပူးပေါင်းဖို့အသင့်ပါခင်ဗျာ.. http://www.songchanmoe.com မှာ ပို့စ်အရေအတွက် ၂၄ခုကို ပြောင်းပြီးပါပြီ..
Minn Yoon Thit - 1/8/11, 5:20 PM
100% unicode blog. :) http://minnyoonthit.net
Myanmar - 1/8/11, 10:24 PM
I have 586 blog posts. 570 posts is now in Unicode. My Site Name is www.MyanmarTutorials.com. All posts will be converted soon. Thanks
Anonymous - 1/9/11, 1:14 AM
ယူနီကုတ်ပြောင်းရေးတာကို စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။ ၇၅၀၀ ပိုစ့်တင်မဟုတ်ဘဲ၊ ဒီထက်ပိုများတဲ့ အရေအတွက် နဲ့ပြောင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။
တခုအကြံပြုချင်တာက ဖတ်သူများ အဆင်ပြေအောင်။ အလွယ်တကူ လိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်အောင် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကိုလည်း ထည့်သွင်းလမ်းညွန်စေချင်ပါတယ်။ ပြောင်းရမယ့် နည်းလမ်း ကို လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ရနိုင်မယ့်နေရာတခုထဲမှာရှိစေချင်ပါတယ်။
ဘလော့ရေးသူ အားလုံးရဲ့ ဖန်တီးရေးသားမူများကို အသိအမှတ်ပြုလေးစားပါတယ်။
MrDBA - 1/9/11, 1:16 AM
ကိုအန်ဒီရေ .. မြန်မြန်ပြည့်သွားအောင် လူစာရင်း လာပေးပါတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော့် မှာတော့ ရေးပြီးပို့စ်ပေါင်း ၁၄၄ ခုရှိပါတယ်၊ ဖြေးဖြေးချင်း ပြောင်းနေပါတယ်။ မကြာခင် အကုန်ပြီးတော့မှာပါ။
Mg Pyone - 1/9/11, 2:31 AM
I've 184 Blog posts ( some are written in English , but most are in Myanmar ) . I've converted all the blog posts to Unicode at January 1. ( I admit that I need to correct some words in some blog posts , it's still ok ) !
Thus, Let's change together =)
Toomar - 1/9/11, 6:54 AM
I already changed 106 post with Unicode. I would like to see your blog as Unicode too.
Andy Myint - 1/9/11, 2:07 PM
Toomar, Myanmar, Minn Yoon Thit, and ဆောင်းချမ်းမိုး, I have already added to the list but I cannot I dentify your blog/site through your ID yet. Unless you have something to prove it, I will later remove from the list. Thank you.
Andy Myint - 1/9/11, 2:20 PM
စိတ်မညစ်ပါနဲ့ မငယ်နိုင်။ အပြောင်းအလဲတွေမှာ ဒီလောက်တော့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဒီအပြောင်းအလဲက အလွယ်ဆုံး အဆင့်မှာ ရှိတယ် ထင်ပါတယ်။
It's that real, လူငတေ? The writing style looks like spam.
အဲဒီလိုဆိုလည်း အားလုံးပြောင်းဖို့ နေ့တစ်နေ့သာ သတ်မှတ်ပြီး လိုက်ပြောင်းမှပဲ မသိင်္ဂါကျော်။ ဒီလိုဆိုရင် ပိုခက်မယ် ထင်တယ်။
cool emerald ဘလော့က လုပ်ထားတာ အတော်လန်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်။
ကိုဒီဘီအေကြီးက အကူအညီပေးမယ်တဲ့ မမယ်ကိုး။ (ကောင်းလိုက်တာ)
Better later than never, TT Sweet. ဘယ်တော့မှ မပြောင်းတာထက်တော့ ကောင်းပါသေးတယ်။
ကိုဒီဘီကြီးက Font-Embedding အကူအညီ ပေးမယ်တဲ့ မအိမ့်ချမ်းမြေ့။ အခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းတဲ့ အစ်မ။ နည်းနည်းတော့ သည်းခံလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
Thanks, Htoo Tay Zar. I like your last post on Unicode. We are in the same boat.
Ha ha.. Saturngod. My intention is more for those who are quite reluctant to upgrade to Unicode than tech geek like you. Anyway, you haveareputable blog and respectable number of readers and I thank you for your contribution.
ဟုတ်တယ် ကိုဆောင်းချမ်းမိုး။ လူအတော်များများ အတွက်တော့ ပြောင်းရတာ နည်းပညာပိုင်း အရရော၊ တခြား အခြေအနေများအရရော မလွယ်ကူလှသေးပါဘူး။
နားလည်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ စာဖတ်သူ။ စာဖတ်ရုံပဲဆိုရင် ဖောင့်ကို စက်ထဲသွင်းရုံနဲ့ ဖတ်လို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကောင်းပါပြီ Mr DBA. Wordpress မှာ ဘလော့ တစ်ခုံလုံးကို တခါတည်း Convert လုပ်လို့ မရဘူးလား။
Thanks, Mg Pyone.
Lionslayer - 1/9/11, 3:10 PM
I noticed that you have written your blog with Eng-My language pair. Can you let Myanmar NLP lab to you use your posts as raw data to analyze for machine translation project?
pandora - 1/9/11, 9:42 PM
အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။ စာရှည်လို့ ဘလော့ဂ်မှာပဲ လာဖတ်ပါတော့။
လူငတေ - 1/9/11, 10:28 PM
လူငတေ အမှနျပဲဖွဈပါတယျ..မသိပါဘူး.ကနြျောကစိတျထဲရှိတာကိုဖှဲ့နှဲ့မပွောတတျတတျတော့ စကားအသုံးအနှုံးတှကေ နညျးနညျးကွမျးပွီးတောငျ့နသေလိုထငျရတယျလေ..
Andy Myint - 1/9/11, 10:34 PM
အားပါး ဆင်ခြေ ဆင်လက် ဆင်နားရွက်တွေကတော့ ရှယ်ပဲ မပန်ဒိုရာ။ :) (နောက်တာ)အခုလို ချက်ကျလက်ကျ ပြောထားတော့ Voice of the resistance တွေကို သိရတာပေါ့။
လူငတေ့ ရေးတာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူငတေ ညွှန်းထားတဲ့ MCP က တောင်းပန်တယ် ဆိုတာ စာ အရေးအသားကို ပြောတာပါ။
လူငတေ - 1/10/11, 5:49 AM
သူမြားတှကေုတျလားမကုတျလားတော့မသိဘူး..ကွညျ့ရသလောကျကတော့..ဦးနီကုတျနပွေီဆိုတော့..ကနြျောလဲ ဦးနီကုတျသလိုတဖွညျးဖွညျးကုတျတတျလာပွီ.ဇျောဂြီလိုခုနျဆှခုနျဆှကလိုကျ..ဦးနီတလညျ့ကုတျလိုကျနဲ့...စိနျဗဒေါဆိုငျးဝိုငျးထဲဝငျတီးနသေလိုကိုဖွဈလို့..ဟိုဘကျတလညျ့ဒီဘကျတလညျ့ပွောငျးနရေတာနဲ့လကျလဲညောငျး..မကျြစိလဲမှဲလှပွီ..ဦးနီက.စာလုံးဖောငျ့အတျောမြားမြားက..သေးသေးကှေးကှေးလေးဆိုတော့..ကွာရကျမကျြမှနျတပျရတော့မယျပုံပေါကျနပွေီ..ယှနျးခြို..ရှမျးမွနျမာ.ဖောငျ့လေးကတော့မဆိုးဘူး.နညျးနညျးကွီးကွီးလေးမွငျရတယျ..ကိုရာဗီတို့..ကိုငှထှေနျးတို့..ကိုမောငျမောငျဆနျးတို့..ဖောငျ့ကွီးကွီးလေးကို..မွနျမွနျလေးထှငျပေးကွပါအုံး.ကနြျောတို့လို့ ဖရီးစားသုံးသူတှအေတှကျ.ခပျမွနျမွနျလေး.အလကားသုံးလို့ရအောငျ.. :)..နိုငျငံအကြိုးပွုအိုငျတီပညာရှငျတှေ..ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစဗြော..
cool emerald - 1/10/11, 5:48 PM
Ko Andy>> ကျေးဇူးပါပဲ ကို Andy ... ဘလော့ရေးဖို့ အားတက်လာ ပါတယ်။
Lionslayer>> သုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးကျမယ် ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။
JulyDream - 1/10/11, 7:12 PM
အားလုံးတပြေးညီ ပြောင်းကြပြီဟေ့လို့ ဒေါင်ဒေါင်ဒင်ဒင် သံချောင်းခေါက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်လေး ပြောင်းနိုင်ဖို့ အခုကတည်းက ကြိုတင် လေ့လာထားပါမယ်။ ကျွန်တော့် Blog မှာတော့ ပို့စ်က ၆၀၀ ကျော်ပဲ ရှိပါတယ်။ တချို့ဟာက ဝင်းကလောဖောင့်နဲ့ တင်ထားတာတွေပါ။ အဲဒါတွေကိုပါ ယူနီကုတ် ပြောင်းရအုံးမယ်။ အများညီပြီဆို အိုခေပါတယ်။
စန္ဒကူး - 1/11/11, 2:45 PM
အားလုံးပြောင်းရင်ကိုယ်လဲလိုက်ပြောင်းမယ်။ မကျွမ်းကျင်တော့ ကိုယ်က အရင်စပြီးပြောင်းမယ့်စာရင်းထဲမထည့်ရဲသေးဘူး။
Anonymous - 1/11/11, 6:06 PM
If we cannot change Unicode, what will happen????
nyimuyar - 1/12/11, 11:08 AM
Hay Ko Andy, I'd migrated to Unicode last weekend, currently my blog has 118 posts.
Anonymous - 1/12/11, 1:45 PM
ဘေးကဆိုဒ်ဘားမှာ ဘလော့လင့်ကို (ပိတ်ထားပေမယ့်လည်း) permenantly တင်ထားပေးမယ်လား သိချင်ပါတယ်
ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ပေါင်း ၅၅၀လောက်ရှိပါတယ်။
ယူနီကုတ်က ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်ဆိုရင် အားလုံးကို ယူနီကုတ်တန်းတူသုံးစေချင်တဲ့ စိတ်တခုပါပဲ
လူညီလို့ ဤကို ကျွဲဖတ်တာမဟုတ်ပဲ
Anonymous - 1/12/11, 3:57 PM
ကျွှန်တော် စာလည်ဖတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ Wesheme ကို အမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တာက ဘေးက feed Roll ကြောင့်ပါ။ WeSheMe ရဲ့ Feed Roll မှာပါရင် ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ (သို့ )ဖတ်သင့်တဲ့ post တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု wesheme က ဘာပဲရေးရေး wesheme နဲ့ အတူ ယူနီကုတ်လိုက်ပြောင်းရင် Feed Roll မှာ တစ်နှစ်တိတိ Auto တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ ကျွှန်တော်လို Feed Roll လာဖတ်တဲ့ ပရိသတ် အတွက် စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။ ဥပမာ....မခင်ဦးမေ ယူနီကုတ်အတူလိုက်ပြောင်းရင်လည်း Feed Roll မှာ တစ်နှစ်လုံးAuto တင်ပေးမှာလား????? ကျွှန်တော် တစ်ယောက်ထဲရဲ့ ပြသနာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Anonymous - 1/12/11, 4:24 PM
စာကောင်း မကောင်းပေါ်မှာ မူမတည်
ယူနီကုတ်ပြောင်း မပြောင်းပေါ်မှာသာ မူတည်သည်
ထိုအရာသည် တွန်းအား မဟုတ်... မက်လုံး သာဖြစ်သည်
Andy Myint - 1/12/11, 4:52 PM
စာဖတ်သူ တွေးတာမှန်ပါတယ်။ ဒါဟာ မက်လုံးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုတ်ကပေးတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို လူတွေက မမက်မောသေးရင် နောက်ထပ်များ ဘယ်လိုများ မက်လုံးပေးလို့ ရသေးလည်း ဘယ်လို စည်းရုံးလို့ ရမလဲတွေးပြီး ဒီလို စီစဉ်မိတာပါ။ စာကောင်းမကောင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ကတော့ စာဖတ်တဲ့သူ အပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းပေါ် မူမတည်ပါဘူး။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကြိုက် Unicode Font မတွေ့သေးဘူး လူငတေ။ One more excuse to delay the change ;)
ဟောဒီမှာ ဒေါင်ဒေါင်ဒင်ဒင် ခေါက်နေတာလေ ကိုJuly
ဒီဘလော့ရဲ့ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီးမှ လုပ်ပေါ့ စန္ဒကူး
Dear Reader, If we cannot change Unicode, we will stay with Zawgyi. :P
Thanks, Nyi Muyar.
ပိတ်ထားတဲ့ စာဖတ်သူ… Permanently တော့ တင်ပေးဖို့ ဘယ်သူကိုမှ အာမမခံပါ။ ၂၀၁၁ တစ်နှစ်တာလုံးလို့ ပဲ ဆိုပါရစေ။ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ Code က RSS Feed တွေ Link တွေကို Access လုပ်လို့ ရမှ Share လို့ရပါတယ်။
စာကောင်းကြိုက်တဲ့ စာဖတ်သူ… တကယ်တော့ အဲဒီမှာ Share ထားတဲ့ စာဟာ စာကောင်းပေကောင်း ဆိုတာထက် Share လို့ ကောင်းတဲ့ဟာ လူကြိုက်များတဲ့ဟာ ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့ဟာဆို ပိုမှန်ပါတယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ အတင်းအဖျင်းလိုမျိုးလည်း ပါတတ်ပါတယ်။ Unicode Blog တွေကို Share ပေးတဲ့အခါကျရင်လည်း စာဖတ်သူ မျှော်လင့်ထားတဲ့ စာမျိုးတွေကို Share ဦးမှာပါ။ မခင်ဦးမေ Unicode ပြောင်းရင် ကျွန်တော်က အတိုင်းထက် အလွန်ကို Share ပေးဦးမှာပါ။ သူ့ဘလော့မှာ စာဖတ်သူတွေ အတော်များတဲ့ အတွက် အဲဒီ စာဖတ်သူတွေ အားလုံး Unicode Font သွင်းထားရင် ကျွန်တော့် စာတွေကိုလည်း ဖတ်လို့ ရတဲ့ သူဦးရေများသွားမှာမို့ပါ။
Anonymous - 1/12/11, 5:45 PM
ဘလော့ရေးသူတွေအားလုံး စိတ်ကနေအင်တိုက်အားတိုက် ပြောင်းလဲသွားအောင် တိုက်တွန်းတဲ့ အကြံပြုချက်လှုံ့ဆော်ချက်ဆို ကောင်းမှာလို့ ခေါင်းထဲရောက်သွားလို့ပါပဲ
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မလွယ်ဘူးဆိုရင် ဟုတ်ပါတယ် မလွယ်ပါဘူး။ လူ့သဘာဝကိုက အသစ်အဆန်းဆို ပြောင်းလဲလေ့လာဖို့ အချိန်မပေးတတ်ကြပါဘူး။ ယူနီကုတ်က တကယ့်ကို အဖိုးတန်အသုံးဝင်တယ်ဆို သူ့အလိုလို ပြောင်းလဲလာကြမှာပါ။ အချိန်တခုတော့ စောင့်ရမှာပေါ့။
Andy Myint - 1/13/11, 1:11 PM
ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း ယူနီကုတ်ရဲ့ ကောင်းကြောင်းတွေကို အပ်ကြောင်း မထပ်ချင်တော့တာရယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အသေအချာ မသိတာရယ်ကြောင့် မရေးဖြစ်ဘဲ ဒီလိုပဲ အတူတူ ပြောင်းကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်တာပါ စာဖတ်သူ။
Anonymous - 1/14/11, 3:05 PM
Bill Gates က နောက်ထွက်မည့် ဝင်းဒိုးစ် တွေမှာ စံမီတဲ့ မြန်မာဖောင့် ထည့်လိုက်ပါပြီ ဆိုတော့မှပဲ အဲဒီ ဖောင့်ကိုပဲ ပြောင်းသုံးပါတော့မယ်။
Anonymous - 1/14/11, 4:10 PM
I don't know about Unicode & i can't type Myanmar font too
The website BBC Burmese is using Myanmar3but i can't read their website at all
I try to convert by any mean i know but still can't read it
so for me, if all the blogs change to Myanmar3fonts, i will give up reading all these blogs
Anonymous - 1/14/11, 6:31 PM
To Anonymous 1/14/11 4:10 PM,
The bloggers shouldn't care whether you read their posts or not. It seems like reading cannot improve your knowledge. :P Nowadays "Change" is notastrange thing. You can't even read BBC Burmese website? How pity you are! I'm notablogger by the way.
ဆုမြတ်မိုး - 1/23/11, 6:27 AM
ကျမလည်းပြောင်းပါ့မယ် ပြောင်းနည်းတော့မဖတ်ရသေးဘူး မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူး ဒါပေမယ့် အကုန်သူလိုက်ပြောင်းပြီး လူသုံးများလာမယ့်သဘောမှာရှိပါတယ်...အဆင်ပြေပါတယ်...ပြောင်းမှာပါ
လက်ရှိတင်ထားတဲ့ပိုစ့်က ၃၅၁ ပိုစ့်ပါ..။
Andy Myint - 1/27/11, 9:07 PM
Bill Gates က Microsoft မှ အနားယူသွားပြီ ဖြစ်လို့ သူကိုစောင့်ရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ဖတ်ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး စာဖတ်သူ :(
Ifablog or web site is properly designed and reader has installed font, it can be viewed, BBC Reader.
Thanks for replying for this blog Reader :)
ကျေးဇူး မဆုမြတ်မိုး.. အကုန်လုံးကတော့ ရေးနိုင်တဲ့သူတွေ ချည်းပဲနော်။ ၃၀၀-၄၀၀ ပို့စ်ဆိုတာ အနည်းဆုံးပါလား။
Anonymous - 2/4/11, 6:49 AM
Those who are using Unicode other than ayar, I cannot read on iPad. Fortunetly, I can read the websites who are using ayar, without installing font into my pc. Even on iPad. I suggest ko Andy, please use ayar for the sake of readers. And ma moe cho thinn too. I amabig fun of you too. Thanks.
Anonymous - 2/27/11, 4:01 PM
A lot of imbeciles are talking about Unicode and it looks like Burmese people are so dump like their unelected military leaders.
The benefits of using Unicode-compliant font, probably, beyond their comprehension and wisdom.
Whatapity, illiterates ?
ဟန်မျိုးထွေး - 3/18/11, 9:29 AM
I think we should change to unicode because its standard Myanmar font .we all should follow that standard to success more and more and support to those who try to develop fonts for free. www.hanmyohtwe.com My site had changed to 100% Unicode.. No problem at all. can read even you don't have fonts.
Real Thakhin - 3/29/11, 5:32 AM
I would rather choose Ayar. As far as I know, Ayar strictly follows Unicode code points, but when it comes to encoding, they chose not to follow3scripts which has encoding problems in most softwares. They did it for the sake of all users.
The so called "Unicode fonts" except Ayar are mostly not compatible with important softwares. Unlike Ayar, other Unicode fonts don't have proper support system.
In addition, Ayar has fantastic type faces (at least 11 different fonts). On top of that, Ayar is compatible with Bamar, Mon, Kayin, Kayah, Kayah Li, Shan, Pa O', and Palaung.
ဂျမ်းဘုံ - 5/19/11, 8:00 AM
Just 18 post.. but would love to join the gang. =)
Myo Kyaw Htun - 6/12/11, 2:45 AM
I am also using Unicode too. Mine is new one http://kophyo.com
This site is neither blogger or wordpress. It is my own blog engine but it has RSS feeds.
Ngwe Tun (Solveware Solution) - 6/12/11, 6:55 AM
Which software are you mentioning? Did you will tested on software? Is it encoding problem or software problem?
Why apple will put so-called "Unicode Fonts"? http://prahita-tmhtet.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
Are they mad? no, Don't think always with Burmese ways of doing? You can't solve that stupid encoding with all the data interchange. What is the keyword compatible with other language. There are no more useful with stupid encoding.
Yangonese - 6/12/11, 4:27 PM
We have 323 posts now and all are in Unicode. thanks.
Yangonese - 6/12/11, 4:32 PM
My personal blog have 87 posts and all are in Unicode. Cheer!
Lionslayer - 6/16/11, 8:46 PM
Combination of blog.yoeyar.com and lionslayer.yoeyar.com is total 159 posts as of today.I am not sure you want to count this asablog though. www.mmspelling.info with 35704posts.
ShwunMi- - 8/11/11, 8:44 AM
Hi bro, sis & everyone!
I've been blogging in myanmar unicode ^_^
If you have time, please feel free to visit and feedback. Thanks!
အောင်းလီ - 10/28/11, 4:28 AM
ဟိုကုဒ် ဒီကုဒ် သိပ်နားမလည်ပါဖူး ကျနော့ အမြင်သက်သက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဇော်ဂျီကို standard ဖြစ်ခိုင်းစေချင်တယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ ... လူ ၁၀၀ ရှိရင် ၁၀ ယောက်လောက်ပဲ ဟိုကုဒ် ဒီကုဒ် ကို နားလည်တဲ့ developer တွေ ဖြစ်မယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေတော့ ဘာမှ မသိ မြန်မာစာလုံးထွက်လာဖို့သာ သိဧ။် ဆိုသူတွေဖြစ်မယ်၊ နောက်ပြီး သူတို့ သိနှင့်နေပြီးသား က ဇော်ဂျီပဲ... သူတို့နဲ့အဆင်ပြေနှင့်နေပြီးသားပဲ.. လူတွေအတွက် အကျိုးပြုခြင်တဲ့ ဆန္ဒ ရှိနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေနဲ့ ယဉ်နှင့်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲ ထပ် upgrade လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..... လူနည်းစု တစ်စု က ဇော်ဂျီကို ပုတ်ခတ်လို့ အံသြမိတယ်.... မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဇော်ဂျီ official website ကို ဘန်းထားတာ.. ပိုအံသြမိတယ်.... ဇော်ဂျီ တည်ထောင်သူတွေက ရာဇ၀တ်မှု တစ်ခုကို ကျူးလွန်လိုက်သလို ဖြစ်နေတယ်..နောက်ပြီး free web hosting က file manager ကိုပဲ ရွေးဘန်းတာလည်း လုံးဝလုံးဝကို အံသြမိတယ်....ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမသိဖူး.. ဇော်ဂျီကို ထောက်ခံရတဲ့အကြောင်းအရင်း တစ်ချက်ပဲရှိတယ်..ဘာလဲဆိုတော့ လူတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ အကျွမ်းဝင်နှင့်နေပြီးသားဖြစ်လို့ ဇော်ဂျီ ယူနီကုဒ် ထွက်လာဖို့ပဲ လုံးဝမျှော်လင့်တယ်.. နည်းပညာပိုင်းအရ ကျွမ်းကျင်သူတွေလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီသင့်တယ်လို့ထင်မိတယ်.. ပြည်သူလူထုကို ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်..သူတို့ဖာသာ သူတို့ ခရီးရောက်နှင့်နေပြီးသားကို ... နောက်တစ်လမ်း အစကနေ ပြန်လျှောက်ဖို့ နောက်နေမဆွဲသင့်ဖူးလို့ထင်မိတယ်...ကျနော်လည်း ဇော်ဂျီနဲ့ ပဲ ရိုက်တတ်တယ်..ဒီစာကိုလည်း end user တစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံစားပြီး ရေးတာဖြစ်ပါတယ်...လူတွေအတွက် အကျိုးပြုနှင့်နေပြီးသား ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဂျီကို ဘယ်လိုမှ လိမ်လည်ပြီး အပြစ်မမြင်နိုင်ပါ။ :)
Thuta Win - 11/2/11, 2:30 AM
ဆငျပါးစပျ နှမျးပကျသလို ဖွဈနပေမေဲ့ ယူနီကုတျ ပွောငျးမဲ့စာရငျးမှာ ပါဝငျပါမယျ...
ပို့ဈကတော့ ၁၂ ပဲ ရှိပါတယျ... အမှားတဈခုနဲ့ အသားကနြေ မိတာနဲ့ပဲ အမှားကို အမှနျ လုပျတာမြိုး မဖွဈ သငျ့ဘူးလို့ လကျခံတာကွောငျ့ ဒီလိုဆုံးဖွတျပါတာပါ... (ခုဒီစာလေးရိုကျဖို့ ၁၅ မိနဈလောကျ ကွာပါတယျ.. အစတော့ ခကျမှာပါပဲ...)
Thuta Win - 11/2/11, 2:44 AM
ပို့ဈကတော့ ၁၂ ပဲ ရှိပါတယျ... အမှားတဈခုနဲ့ အသားကနြေ မိတာနဲ့ပဲ အမှားကို အမှနျ လုပျတာမြိုး မဖွဈ သငျ့ဘူးလို့ လကျခံတာကွောငျ့ ဒီလိုဆုံးဖွတျပါတာပါ... (ခုဒီစာလေးရိုကျဖို့ ၁၅ မိနဈလောကျ ကွာပါတယျ.. အစတော့ ခကျမှာပါပဲ...)
Lin YuJin - 6/28/13, 9:27 AM
ဒီပို့ဈကို ရေးတာ ၂နှဈခှဲရှိပမေယျ့ ၅၀၀၀ မပွညျ့ပါဘူး။ ဘလော့ပိုငျရှငျကိုလညျးမ တှတေ့ော့ပါဘူး။ အခု googleရော facebookရော မွနျမာလိုသုံးလို့ရပွီး unicode fontနဲ့ဆိုတော့ ရေးတဲ့စာတှလေညျး unicodeပွောငျးကွရအောငျလို့ နှိုးဆျောပါတယျ။ www.facebook.com/fengshui2share4 တဈခုတညျးသော ယူနီကုဒျသုံး facebook page ပါ။ www.fengshui2share4.blogspot.com ကမြရဲ့ blog အသဈလေးပါ။ လာလညျကွပါ။ ဒီ ပို့ဈကို ဆကျအသကျသှငျးနသေေးရငျ ညီမရဲ့ blogကို အဈကို့ စာရငျးထဲမှတျလိုကျပါ။